CD kely Ubuntu | Avy amin'ny Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Fitsinjarana, soso-kevitra, Tutorials / Manuals / Tips
Ity lahatsoratra ity dia navoaka tao amin'ny Taringa avy amin'ny mpampiasa miantso ny tenany petercheco ary nangataka ahy izy hametraka izany ao amin'ny bilaoginay. Ao aminy, ity mpampiasa ity dia mampiseho antsika ny fomba fametrahana Ubuntu amin'ny fomba Debian (amin'ny netinstall).
1 Ampifanaraho ny Ubuntu 12.04 / 12.10 Haingana sy milamina kokoa!
Ampifanaraho ny Ubuntu 12.04 / 12.10 Haingana sy milamina kokoa!
Anio dia hasehoko anao ny fomba tsara indrindra ahazoana a Ubuntu 12.04 LTS, na ny dikanteniny 12.10, tena marin-toerana fa miaraka amin'izay koa, havaozina amin'ireo kinova farany an'ny Ubuntu tsy mijaly amin'ny zava-dratsy rehetra an'ity distro ity ary manararaotra ny tombony fotsiny.
Fa maninona no atao? Betsaka ny olona no mimenomenona amin'ny maha-tsy marin-toerana azy, miadana ary spam io Ubuntu, saingy vitsy no mahalala an'izany Ubuntu mety ho safidy tsara io. Tokony ho fantatrao fotsiny ny fomba fandefasana azy amin'ny fomba mety. Ahoana no anaovantsika azy? Andao hojerentsika ..
Nosintoninay ny sarin'i Ubuntu (CD faran'izay kely na netinstall).
Dikan 12.04 Dikan 12.10
Izahay dia mandoro ny sary tianay amin'ny CD na manamboatra azy io amin'ny pendrive ary mahazo antoka fa mifandray amin'ny tariby amin'ny Internet ny pc. Mamerina ny PC izahay ary manomboka mametraka.
Raha vantany vao tonga eo amin'ny efijery safidy fonosana toy izao isika:
Avelantsika tsy voamarina ny safidy rehetra ary tsindrio fotsiny ny Enter. Ny rafitra dia hamita ny fametrahana tsy misy tontolon'ny sary.
Indray mandeha ny antsika Ubuntu Napetraka tsy misy tontolon'ny sary idiranao. Mba hanaovana izany dia soraty aloha ny solonanarana ary avy eo ny teny miafinao. Raha vao miditra dia manohy
ampidiro ny tenimiafinao faka ary apetraho:
Raha vantany vao tafapetraka izy ireo dia manomboka indray, ao amin'ny mpitantana ny mpampiasa dia safidio ny «desktop gnome classic» amin'ny birao ary mihidy ianao
Vantany vao miditra amin'ny rafitrao izy ireo dia manokatra ny Mpitantana fonosana Synaptic (na amin'ny alàlan'ny terminal) ary apetrakao ireo fonosana fototra ireo hahazoana rafitra iray vonona hiasa tanteraka:
$ sudo apt-get install ubuntu-restried-extra file-roller rar unrar system-config-printer cup vlc brasero kde-l10n-es okular p7zip devede libreoffice libreoffice-gtk libreoffice-l10n-es gimp gdebi gcalctool firefox firefox-locale-es thunderbird thunderbird-locale-en gconf-tonian-dahatsoratra
Manoro hevitra ny hametraka ihany koa aho devede, transmagedona y arista.
Fampiharana saika tena ilaina hametrahana mpamily fananana ampiasain'ny Ubuntu: jockey-gtk.
ARY Vonona. Ny vaovao mahavariana sy vaovao anao Ubuntu 12.04 na 12.10 manomboka izao dia vonona izy ary milamina tsara nefa tsy manana fonosana tsy misy fako napetraka ao a Ubuntu toerana misy anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » CD kely Ubuntu
Lahatsoratra tsara, ary hametrahana KDE inona no tokony hapetraka? Ny fametrahana manaraka dia hamporisihiko ianao hametraka azy toy izao ary ho hitantsika raha milamina kokoa izany!
Mba hanaovana fametrahana miaraka amin'ny KDE dia apetranao ny rafitra fototra .. Avy eo manohy amin'ny:
apt-get -y hametraka kubuntu-desktop –no-install-fahazoan-dàlana
apt-get -y mametraka manager-network synaptic
apt-get -y mametraka kubuntu-voafetra-extra rar unrar system-config-printer-kde cup vlc brasero p7zip devede libreoffice libreoffice-kde libreoffice-l10n-es gimp gdebi firefox firefox-locale-es thunderbird thunderbird-locale-es
Salama, lahatsoratra tsara,… inona no tianao holazaina amin'ny base system, ny tianao holazaina dia ny misintona kubuntu minimal na misintona fotsiny avy amin'ireo rohy napetrakao eto?
Midika izany fa apetraho amin'ireo rohy navoaka tao amin'ny lesona. 🙂
Nuansa roa. Raha tokony ho gdebi (kinova GTK) dia misy ny fonosana gdebi-kde, ary ho an'ny mpitantana tambajotra dia mitovy amin'izany, antsoina hoe network-manager-kde ilay fonosana. Brasero dia fampiharana Gnome, mety kokoa ny mampiasa K3b raha tokony ho izy. Amin'izany isika dia hanana rafitra madio sy mifangaro kokoa.
mpitsidika dia hoy izy:
Tsy aleo ve mampiasa muon ho an'ny kde?
gdebi-kde dia tsara kokoa raha tsy misy fisalasalana ary tsy misy olana momba ny fitoniana 🙂
Salama, nampiasa an'io fomba io aho, miaraka amin'ny tsy fitovizako fa tsy bootiko avy amin'ny kapila mafy ary nametraka xubuntu. Izany hoe tsy nanao dingana telo sy efatra aho (tokony hataoko?).
Tavela niaraka tamina xubuntu 12.10 madio sy marin-toerana aho.
Valiny tamin'i Hunter
William_uy dia hoy izy:
Araka ny tutorial, "# apt-get -y mametraka ubuntu-desktop" no tsy maintsy tanterahina, mamela antsika hanana ny tontolo "gnome classic" (gnome 2) fotsiny ve izany sa mamela antsika hisafidy ny Unity? raha tsy izany, ahoana no tokony hampidirana ilay baiko hampiditra ny Unity?
Misaotra betsaka ary arahaba.
Mamaly an'i William_uy
Ity fomba ity dia manome anao ny safidy firaisan-kina nefa tsy misy .. tsy misy applet na solomaso. Ny fananana firaisana dia tokony hataonao:
apt-get -y hametrahana ubuntu-desktop –no-install-fahazoan-dàlana
apt-get -y mametraka manager-network synaptic gnome-panel
apt-get -y mametraka firaisankina *
Misaotra betsaka. Fampianarana tena tsara
Misaotra betsaka, faly manampy 🙂
Inona no maha samy hafa ny fametrahana:
Amin'ireo lahatsoratra isan-karazany izay ao anaty tamba-jotra dia tsy voalaza izany, mametraka kde-plasma-desktop aho ary misy kde farafahakeliny sisa tavela.
Amin'ny fametrahana kde-plasma-desktop dia mametraka kde fototra ho an'ny birao vita amin'ny mpamorona kde ianao. Miaraka amin'ny kubuntu-desktop –no-install-dia mamporisika anao hametraka biraon'ny kde sy ny netbook miaraka amina fampiharana kely ilaina.
nametraka lubuntu aho fa tsy xubuntu.
@petercheco, misaotra betsaka.
Ary hametraka vady? Misaotra betsaka
Mametraka ny rafitra fototra ianao ary manohy amin'ny:
Ampiana ny toeran'ny Mate:
Ho an'ny Ubuntu 12.04:
sudo add-apt-repository «deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu mamaritra main »
Ho an'ny Ubuntu 12.10:
Ary manohy amin'ny:
sudo apt-mahazo mametraka mate-archive-keyring
sudo apt-mahazo mametraka mate-core
Ary voila 🙂
raha hampiasa ny ppa dia mila mametraka sudo apt-get install python-software-fananana 🙂 ianao
Azonao aseho aminay ve ny fisamborana azy? Indrindra ny fahitana izany firaisankina "foana" izany. Ary ondrilahy inona no ampiasainao amin'izany?
Ireto misy sary:
Petercheco, ohatrinona ny habaka ampiasainao amin'ireo latabatra napetrakao rehetra? Ny fanontaniana dia ho fanovozan-kevitra fotsiny, iray ihany no ampiasaiko, ny firaisankina mandritra ny roa volana –http: //i.imgur.com/2lLBV52.png–
Mandeha manodidina ny 3Gb amin'ny kapila mafy aho .. 🙂
Tsy ilaina ny mametraka ny birao ubuntu, azonao atao ny mametraka mivantana ny gnome na panel-gnome (hiditra amin'ny session fallback fotsiny).
Rehefa efa hainao ny mamindra azy kely dia heveriko fa ity no fomba tsara indrindra hametrahana tsy ity ihany fa ny distro linux rehetra. Ianao dia maka fotoana mitovy amin'ny fametrahana tanana ireo programa tadiavinao ho toy ny mamafa ny tsy tadiavinao raha mametraka default ianao, miampy ny tsy fitovizany.
Fotoana vitsy lasa izay dia nametraka an'i Debian tamin'ity fomba ity aho izao dia hanandrana amin'ny ubuntu 12.10 32 bits aho fa amin'ny vbox hahitana ny fandehany 😀
Ampitain'i Petercheco ny rohinao amin'ny sofina, tsy hitako ianao!
Te-haneho hevitra momba ity manaraka ity aho ary holazain'izy ireo amiko raha marina izany na tsia, farafaharatsiny efa nosedraina tamin'ny milina maro aho ary izany dia manome ahy ny referansa hametrahana azy eto.
Misy ny fizarana eritreretina tanteraka ho an'ny netbook, miaraka amin'ny tena traikefa amin'ny efijery kely izay tsy misy manome hafa; momba ny: Kubuntu.
Raha ny marina ny fizarana rehetra miaraka amin'ny KDE dia manana safidy mifindra amin'ny birao mankany amin'ny Netbook-plasma. (Ovaina ao anaty toerana)
Betsaka ny olona no hilaza fa mandany loharanon-karena maro ny KDE ary nisy izany, saingy miaraka amin'ireo kinova farany, indrindra ny 4.10, dia nihena be izany, inona no vitsy no mahalala an'ity zaraiko ity:
Kubuntu dia fizarana tena tsara. Mametraka azy ianao ary mampifanaraka ny birao amin'ny "Kubuntu-netbook-plasma" (Google sary an'io ary ho hitanao izay holazaiko aminao). Avy eo, rehefa tafapetraka ianao, sokafy ny fonosana Muon ary apetaho ny "kubuntu-fat-low-setting" ary avereno.
Ny ataon'ity rakitra ity dia ny famonoana ireo serivisy maro izay vitsy no mampiasa ary mandany loharano maro, mahatonga ny KDE ho safidy tsara ho an'ireo milina tsy manana loharanom-pahalalana firy ary miaraka amin'ny biraonao Netbook-Plasma manana GNU / Linux tonga lafatra indrindra ho an'ny netbook. Mety ihany koa ny mamono ny vokany rehetra. Mbola misy vokany eo amin'ny menio ihany ny fiasa mahazatra ary mijery tsara ary aza miadana ny masininao.
Manana Kubuntu 12.10 x86 napetraka ao amin'ny Acer Aspire ONE D255E izay ampiasaiko mandritra ny fihaonambe aho, ary ampifandraisiko amina projecteur ivelany izany; miaraka amin'i Impress aho no mandalo ny slide-ko; miaraka amin'i Gwenview dia mamakivaky ny sary rehetra aho (miaraka amin'ny anaran'ny isa na litera mba hilamina) ary milalao horonan-tsary miaraka amin'ny VLC aza aho. Ary raha manana Bluetooth ny masininao, afaka mizara rakitra mora foana ianao na mifandray amin'ny telefaona, ny headphone, ny keyboard na ny totozy. Izaho koa dia nanao kaonferansa horonantsary tao amin'ny Skype.
Ny KDE Netbook-plasma no eritreritra birao tsara indrindra sy namboarina ho an'ireny minisitra ireny. Tsy misy tsara noho izany. Tsy manakaiky izay ananantsika ao amin'ny GNU / Linux mihitsy i Windows.
Vintana. Famihinana majika.
rafozam-bavy84 dia hoy izy:
izany toerana ambany tavy izany dia ho an'ireo izay tsy te-hanao net install.
Mamaly an'i sueg84
Ex-troll dia hoy izy:
Andramo, heveriko fa amin'ity no ho ilay vintana 4 omeko ny Ubuntu 12.04, antenaiko fotsiny fa mety izany
Mamaly an'i Ex-Troll
hehe fandraisana anjara mahaliana: 3 miaraka amin'ity dia ho tsara tokoa ny fametrahana arakaraka ny filan'ny tsirairay xD ny zavatra tsara indrindra dia ny famoronana script bash hamerenana ny fametrahana ny tontolo iainana tsirairay hehe Mieritreritra ny hanao fanandramana amin'ity aho haha , manandrana azy amin'ny mpanao ubuntu: 3
Salama hariva, nanandrana nametraka azy tamin'ity fomba ity aho fa tsy mahita tambajotra izany, milaza amiko izy fa tsy hita ny modules an'ny tambajotra. Tsy afaka manohy ny fametrahana tariby aho, fa raha manao izany amin'ny Debian aho dia tsy misy olana… Misarika ny saiko izany…
Salama maraina, nieritreritra aho fa namoaka ny hevitro omaly, angamba novonoiko ny pc nefa tsy nandefa azy aho. Na izany na tsy izany, manana olana amin'ny fametrahana azy aho rehefa tonga any amin'ilay faritra itadiavany ny fitaovan'ny tambajotra, any aho dia mahazo hafatra mampitandrina ahy fa tsy nisy mpifanerasera hita (tokony hazavaina fa mifandray amin'ny tariby aho ary miasa izany. eny, efa nanao ny fanamarinana aho teo aloha).
Izao no lazain'ny hafatra:
“Tsy misy ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra hita. Midika izany fa tsy nahita fitaovana tambajotra ny rafitra fametrahana.
Mety mila mandefa maodely manokana ho an'ny karatra tambajotra ianao, raha manana izany. Raha te hanao izany dia miverena amin'ny dingana fahitana finday. "
Rehefa nametraka an'i Debian avy amina fametrahana kely dia kely aho dia efa nisintona ny firmware ho an'ny Wi-Fi board ary niasa teo no ho eo izy io, na dia efa vita tamin'ny tambajotra tariby aza ny fametrahana. Gaga aho fa tsy hitany akory ilay tariby. Raha afaka manampy ahy ianao dia ho feno fankasitrahana aho. Misaotra tamin'ny fampahalalana mahazatra rehetra.
noho ireo tranga ireo dia namoaka fidirana iray hafa tao amin'ny taringa.net aho. Ny vahaolana amin'ny olan'ny mpamily anao dia ny sarin'ny mpizara Ubuntu. Ny rafitra fototra dia apetraka fa amin'ny sary mitovy ihany no ahitanao mpamily sy ny kely indrindra ilaina ..
Mba hisintomana ny isosa Ubuntu 12.10:
Misy mahay manao zavatra toa izany ve nefa raha tokony hosedraina izy ireo ary ny birao misy anao dia Razor-Qt?
Ny haingana indrindra dia:
Ampidiro ny rafitry ny Debian. Vantany vao vitanao ny fametrahana ary miditra ao amin'ny Debian anao tsy misy tontolo misy sary voalohany, miroso amin'ny:
Sokafy ny terminal ary midira ho faka. Araho ary:
add-apt-repository ppa: hareza-qt
Mandehana mankany amin'ny lisitry ny loharano ankehitriny
Ao amin'ny tsipika mifanandrify amin'ny silo repo dia ovao ny distro an'ny repo, toy izao:
deb http://ppa.launchpad.net/razor-qt/ppa/ubuntu tena lehibe
deb-src http://ppa.launchpad.net/razor-qt/ppa/ubuntu tena lehibe
Mitsitsia miaraka amin'ny fitambarana manan-danja CTRL + O ary farano amin'ny CTRL + X
apt-get -y dist-fanavaozana
apt-mahazo mametraka razorqt
Miala tsiny fa tsy manokatra terminal ianao satria efa ao anatiny 😀
Azonao atao ve ny milaza amiko ny tianao holazaina amin'ny fonosana junk?
"... marin-toerana tokoa nefa tsy manana fonosana tsy misy fako napetraka ao amin'ny Ubuntu."
Midika ve izany fa ny fametrahana ny Ubuntu amin'ity fomba ity dia mametraka ireo fonosana tena ilain'ny PC anao ary manala ireo be loatra?
gerno dia hoy izy:
Salama, nanaraka ity fampianarana ity aho mandra-pahatongan'ny fotoana hidirana ary manana olana be te hahafantatra aho.
Tsy afaka miditra amin'ny kaontiko lightdm aho, miditra ny anarako sy ny tenimiafiko ary miverina amin'ny efijery jiro indray. miaraka amin'ny firaisan-kina sy kilalao gnome.
Raha mampiasa ny kaonty vahiny aho dia afaka miditra amin'ny tontolon'ny sary tsy misy olana, na amin'ny firaisankina na amin'ny kilasika gnome.
marina ny teny miafina ary avy any amin'ny terminal no idirako tsy misy olana.
Mamaly an'i gerno
satria ampiana fampahalalana fanampiny fa ny zavatra "hafahafa" nataoko dia ny mametraka / trano amin'ny fizarazarana misaraka.
Tsy misy, aza manahy, tsy afaka tsy hanana solosaina intsony aho. Hanova distro aho na zavatra hafa.
Bitcero dia hoy izy:
Fampianarana tena tsara dia tsara, arahaba soa.
Zavatra roa no tiako ho fantatra, ny voalohany:
Tiako i Kde, ary efa hitako ny fomba fametrahana azy, fa tiako be koa ny "jereo ny fahatsapana" an'ny Gnome-Shell, hametahana akorandriaka toa izao:
apt-get -y hametrahana gnome-shell –no-install-fahazoan-dàlana
Hanitsy ahy raha diso aho.
Ny zavatra faharoa tiako ho fantatra dia tsy fantatro, raha toa ka samy mitondra ny spam avokoa ny kinova samihafa an'ny Ubuntu (Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu, sns). Fantatro fa ny Ubuntu (Unity) dia mitondra an'i Amazon izay hitondra ny saoka spam ary hahafantatra zavatra hafa.
Mamaly an'i Bitcero
tsara aminao raha te hanana gnome fametrahana kely dia hataoko:
apt-get -y mametraka gnome-core
Mametraka ny zava-drehetra avy amin'ny ekipa gnome:
apt-get -y mametraka gnome
Raha ny amin'ny fanontanianao faharoa amin'ny Xubuntu dia esory fotsiny ny Ubuntu Software Center ary ampiasao Synaptic ohatra. Raha tadidiko tsara dia apetraka amin'ny Ubuntu sy Xubuntu fotsiny ny Ubuntu Software Center satria mampiasa Muon sy Lubuntu mankany amin'ny ivon-rindrambaiko Lubuntu i Kubuntu. Ubuntu miaraka amin'ny Unity ihany no manana ny olana spam.
Azonao atao ihany koa ny mandeha amin'ny karazana UBuntu miaraka amin'ny akorandriaka Gnome napetraka amin'ny alàlan'ny default antsoina hoe Ubuntu Gnome remix:
Misaotra anao mamaly ahy. Izaho dia Ubuntero, fantatro ny kely fantatro tamin'ity fizarana ity, tamin'ny fiandohany niaraka tamin'ny gnome 2, avy eo nandeha tany amin'ny KDE (mahavariana isan'andro) Kubuntu aho, manohy ireo fizarana roa (roa). Amin'izao fotoana izao aho dia manana remix Ubuntu gnome napetraka araka ny voalazanao (tsy fantatro izay an'ity gnome-shell ity fa tiako izany, na eo aza ny tsikera).
Ny nifiko dia nivoaka niaraka tamin'ny fonosana .deb.
Tsy fantatro ny fomba fametrahana ubuntu raha saika hadalana.
Tena tsara izany tuto izany, efa nanandrana ny ubuntu 12.04 aho ary haingana sy milamina kokoa noho ny andiany 12.10 fa ny marina dia tsy tiako amin'ny firaisan-kina ny Ubuntu, mavesatra loatra izany, vao mainka aho mieritreritra fa mavesatra be ihany toy ny windows 7, tsy amin'izao fotoana izao amin'ny pc manokana misy ahy dia manana Xubuntu tsara aho, ary tena tiako be ny Kubuntu.
PS: (Ao amin'ny solosaina eny amin'ny oniversite aho) hehehehe Tsy dia mampiasa windows matetika aho
Ahoana no hametrahana Kanelina ?? ... mety ho toa izany ve?
#sudo apt-mahazo hametraka kanelina
Sa misy kinova kely indrindra ho an'ny Kanelina ??
Leodan dia hoy izy:
Salama, apetraho ubuntu-12.04.2-desktop-i386, amin'ny varavarankely misy boot-dual….
ok fa rehefa misafidy ny hanomboka amin'ny ubuntu aho dia miditra amin'ny mode console ... maninona ???
Tsy asehony ahy ny tontolon'ny sary, ny birao ary ny fampiharana hafa .. ..
Ahoana no hametrahako ireo rindranasa rehetra ireo ... Fantatro fa amin'ny alàlan'ny tsipika baiko, inona no anampianao ahy sy hitarihanao ahy raha toa ka efa manana ny tontolon'ny sary sy ny modules hafa ianao, inona ireo dingana tokony harahina ... Misaotra betsaka ... Salama ....
Valiny tamin'i Leodan
Raha nampidina ny iso tamin'ny rohy naseho tamin'ity lahatsoratra ity ianao dia satria ireo kinova ireo dia tsy manana tontolon'ny sary, eo no ampisehoany ny fomba fampidirana ny tontolon'ny sary an'ny ubuntu, ary amin'ny fanehoan-kevitra azonao jerena ny fomba manampy sary hafa. tontolo
Mbola tsy azoko hoe inona ny bikan'ny okular eo afovoan'ny rafitra kely mifototra amin'ny gnome.
Salama, tsara ny nametrahako tamin'ny KDE… ary niasa tsara izany, saingy rehefa manavao aho dia tavela tsy misy tontolon'ny sary indray, toy ny hoe tsy nanana tontolon'ny sary aho. Ny marina dia tsy fantatro ny fomba hamahana an'io, manana karatra horonantsary ATI aho
Ry olona tsara… .fidio ny ubt 12.04.2 lts, ​​amin'ny windows xp sp3, amin'ny fampiasana booty roa
Nametraka ubuntu aho tamin'ny wubi.exe… ..nisy 32… ..fa rehefa manomboka ubuntu aho… .ary zahako manamarina inona ny rafitra ananako …… amin'ny fampiasana ny tsipika baikon'ny commande…… .tsarako fa manana ubuntu 12.04.2 aho. 86tls x64_64… .. milaza izy fa manana rafitra 32-bit… .satria raha apetrakao amin'ny 64-bit… .. Mety hanimba ny solo-sainako izany amin'ny alàlan'ny 32-bit …… satria nametraka 64- foana aho bit system toy ny windwos xp, fa tsy haiko hoe maninona no apetrako amin'ny 4bits… ..ny fanontaniako dia hoe raha mety hanimba ny PC-ko ity dia manana processeur P64 intel aho, milaza izy fa manohana 7211bits, motherboard ms-1, RAM 128GB…. Horonantsary XNUMX MB… .Misaotra… amin'ny valin-teninao… .. SALAMO…
olona ihany koa, mila anao aho hanome ahy ny fanasoavana lehibe amin'ny endrika Oracle 11g sy oracle …… ho an'ny Ubuntu 12.04.2 lts ……. Misaotra betsaka…
Ho an'ny Oracle 11g dia ampiasao ny CentOS fa tsy ubuntu ..
Jorge Andrés Devia Mosquéra dia hoy izy:
Raha mifikitra amin'ny dingana roa aho ary tsy miasa afa-tsy amin'ny console, inona no tena napetrako? Ubuntu? Kernel? Tsy misy inona?
Valiny tamin'i Jorge Andrés Devia Mosquéra
Fototra Ubuntu tsy misy tontolo X na sary 🙂
Osca G dia hoy izy:
Ampiasaina hametrahana fotony farafahakelin'ny xfce izy, hoy aho satria te-hametraka ubuntu minimal amin'ny xubuntu minimal aho
fa ny olana dia tsy manohana an'i uefi izy
Valiny tamin'i Osca G
Firefox 19 misy
[TIP] Ataovy izay hampiasa ny lohahevitry ny kisary ao amin'ny KDE i Firefox